Wararka Lenovo: Sii deynta, Mobiles-yada, Kiniiniyada, xididka iyo inbadan - Androidsis | Androidsis
Lenovo waa shirkad shiineys ah oo hada suuq geynaysa taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada iyadoo Android ay tahay nidaamka hawlgalka. Shirkadda ayaa sidoo kale caan ku ah soo saarista kumbuyuutarrada laptop-ka, iyo waxyaabaha kale ee elektaroonigga ah. Noocyada ay ka mid yihiin ZUK iyo Motorola ayaa hadda ka mid ah kooxda Lenovo, sidaa darteed waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan suuqa Android.
Telefoonada Lenovo waxaa lagu gartaa qiimo weyn oo lacag ah, wax iyaga ka dhiga iyaga ikhtiyaar ay aad u xiiseeyaan macaamiisha. Halkan waxaad ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ama dib u eegista ku saabsan taleefannada Lenovo oo leh Android sida nidaamka hawlgalka.
by Haaruun Rivas samee Bilaha 10 .
Yurub ayaa soo dhaweysay taleefan casri ah oo cusub, kaas oo aan ka aheyn Legion Phone ...
Shirkadda Shiinaha ee iska leh Motorola, Lenovo, ayaa mar kale sameysay sarkaal cusub oo kiniin ah, kaasoo hoos yimaada ...
Lenovo Legion Phone Duel hadda waa rasmi wuxuuna adeegsadaa Snapdragon 865 Plus iyo shaashadda 144 Hz
Lenovo ma ahan nooc caan ah oo lagu yaqaan inay ku soo bandhigto taleefannada casriga ah ee ciyaaraha ka shaqeeya warshadaha. Xaqiiqdii, in ka badan ...
Lenovo Z5 Pro GT, waa mobiladii ugu horreeyay adduunka ee leh Snapdragon 855, ugu dambeyntiina wuxuu helaa Android 10
Snapdragon 855 wuxuu ahaa Chipset-kii ugu waxqabadka badnaa ee 2019 kaas oo lagu dhawaaqay dhamaadka 2018. Tani…
Lenovo Legion wuxuu soo bandhigi doonaa 90W xawaare dhakhso leh
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee Sannadka 1 .
Dhowr usbuuc ka hor waxaan ka hadleynay sida ay uga go'an tahay shirkadda Lenovo shirkadda casriga ah ee ciyaaraha, Lenovo Legion….
Lenovo M10 Plus, kiniin cusub oo weyn oo ku tiirsan Mediatek's Helio P22T chipset
Waxaan hadda ogaanay taxanaha cusub ee taleefannada casriga ee Huawei, oo ay ku jiraan saddexda P40 ee xoogga badan, iyo ...
Lenovo A7 waa mobilada cusub ee qorsheynaya inuu ku dhiirado xadka hoose ee Spreadtrum SoC
Lenovo waa shirkad shiineys ah oo aan si joogto ah u soo saarin taleefannada casriga ah. Sidaa darteed, buuggaaga ayaa xoogaa ...
Lenovo wuxuu rabaa inuu si buuxda u soo galo suuqa casriga ee ciyaaraha iyadoo la bilaabayo nooc cusub oo ah ...
by Haaruun Rivas samee 2 sano .
Lenovo M10 FHD REL waa magaca kumbuyuutarka cusub ee casriga soo saaraha ee hadda loo heli karo ...
Taxanaha Lenovo K10 iyo taxanaha Lenovo K10 Plus ayaa laga yaabaa inay xubin cusub dhawaan helaan. Dukumiintiyada shahaadada ee ...